I-Melbourne Tram isebenza ngamandla aSolar apheleleyo | RayHaber
ikhayaTHE WORLDIOCEANIA61 waseAustraliaI-Melbourne Tram isebenza kumandla elanga
30 / 07 / 2019 61 waseAustralia, THE WORLD, railway, JIKELELE, KENTİÇİ Rail Systems, IOCEANIA, tram
I-melbourne tram ihamba ngokupheleleyo ngamandla elanga
IMelbourne, idolophu enkulu yelizwe laseVictoria, ejolise ekunyuseni amandla ombane ahlaziyiweyo ngepesenti ye-50, isebenza kuyo yonke inethiwekhi yetram kwisixeko ngamandla elanga.
IMelbourne, isixeko sesibini ngobukhulu eOstreliya, yaqala ukusebenza kwinethiwekhi yedrama yonke yesi sixeko ngamandla elanga.
Neoen Numurkah Amandla oMbane weSolar, avulwe ngokusemthethweni kwiveki ephelileyo, avelisa ipesenti yamandla ahlaziyiweyo ye-100 ukusebenzisa inethiwekhi enkulu yedrama yedolophu. Eli ziko lakhiwa ukubonelela nge-255 yeeyure ezingama-megawati iiyure zombane kwigridi yamandla kazwelonke ngonyaka. Le projekthi yaxhaswa phantsi kwePhulo likaSolar Trolley lase-Australia.
I-390 ilingana nokutyala imithi eliwaka
Ndiyabulela kule projekthi, abahlali baseMelbourne baya kuba neetram zokucoca kunye nezazela ezikhululekileyo. Ukukhutshwa kwekhabhoni okuya kuncitshiswa ngumatshini omtsha we-solar ngokulingana nokususa iimoto ezili-750 eziliwaka kwiindlela okanye ukutyala ujikeleze izihlahla ezili-390. IVictoria, idolophu enkulu yaseMelbourne, ibeke ithagethi yayo yokuhlaziywa kwamandla njenge-2025 ukuya kwi-40 kunye ne-2030 ukuya kuthi ga kwi-50. Le projekti yamandla elanga nayo ithathwa njengenyathelo elibalulekileyo malunga noku. (i Dünyahal)
Zonke izitimela zaseHolland zisebenza ngamandla omoya
Iipaneli zelanga zanda, Izmir zinqoba
Istanbul Commuters Lines iya kuphelisa ngokupheleleyo kwi-2018
Inkundla igqiba, i-İZBAN Campaigns iyayeka ngokupheleleyo
I-İZBAN Expeditions Iphelile ngokupheleleyo!
Ubomi obude kunye neNdawo yaseKhaya yaseKrete yaseKrete esebenza kuManisa
Inqwelo yokuQala yoMbane yeMidlalo yoMbane ka-Toyota…
Uloliwe oMandla oMbane weSolar yokuqala yeHlabathi…
Ukuguqulwa kwamandla omhlaba kwi-ESHOT
I-Solar Power enabled Entered Service!
Iiphaneli zesolar zeSAMULAŞ Yokwakhiwa kwe130 amawaka eT…
Iingeniso ezingenanto kunye ne-Solar Trolley Export evela kuDenizli
Ukusuka kwiqela leMoto weSolar kuMongameli uBüyükerşen
I-ITU IQela leMoto leSolar kwiBTSO
Itremu yamandla elanga
Inethiwekhi yetram ye-Melbourne
Ukuhamba kweKayseri kusindiswe i-1 yezigidi ze-121 amawaka e-920 i-Lira ngemveliso yasekhaya
Umsebenzi we-Asphalt kaCeyhan kwi-20 Avenue